ဖေ‌ဖျောဝါရီ 19, 2020 – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ 1. Stomach Ache ကလေးငိုရင် နို့ဆာတာ၊ လေနာတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ကလေးနည်းနည်းကြီးရင် သံကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ လေကြောင့်နာရင် ခါးကော့ငိုမယ်။ Colic ဗိုက်ရစ်နာတာ၊ Gastroesophageal reflux အစာခြေရည်အထက်ဆန်တာ၊ Food intolerance အစာကိုလက်သင့်မခံနိုင်တာ၊ Virus ဗိုင်းရပ်စ်တွေကနေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။...
အော်ဂဲနစ်အစာ ဘာကြောင့် စားသင့်သလဲ . . .
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. အခုအချိန်မှာ အော်ဂဲနစ်အစားအစာတွေကို ပိုစားဖို့ပြောနေကြပါတယ် ဆရာမ။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ Win Win (FB) A. အော်ဂဲနစ်ဆိုတာ ပိုးသတ်ဆေးတွေ လုံးဝအသုံးမပြု၊ တာရှည်ခံတဲ့ဆေးတွေ လုံးဝမသုံးဘဲ စိုက်ပျိုးစားသုံးနိုင်တဲ့...
Featured weird Nutrition News Beauty Skin Care Diabetes Food kid Pregnancy Female healthy Cancer mental care Healthy Life Eye Care Physical Exercises Lessons Foods Celebrities Experience Male Knowledge Weight Loss Dental Care Myanmar Health fun Stress laughter Family Sleep Lesson Vegetables Hypertension Mental Health Home Remedies Baby Sex Skin cancer survivor